Xubo ka socdo Aqalka sare oo gaaray Kismaayo iyo Baydhabo. – Hornafrik Media Network
Xubo ka socdo Aqalka sare oo gaaray Kismaayo iyo Baydhabo.
HornAfrik-Wafdi ka socda Golaha Aqalka sare oo maanta ka ambabaxay Garoonka caalamiga ah ee Aadan Cadde ee Muqdisho ayaa gaaray magaalooyinka Kismaayo iyo Baydhabo oo ah ee xarumaha KMG ah ee Maamulada Jubbland iyo Koonfur Galbeed,halkaasi oo ay si weyn ugu soo dhoweeyeen Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed.
Wafdigan oo ka kooban mid toban Xubnood ayaa maagaalooyinkaasi u tagay xal waara iyo isfaham ka dhex dhasha Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada iyo sidoo kale madaxda Dowlad Goboleedyada dhexdooda raadiyaan,waxaana Wafdiga hoggaaminaya Senator Axmed Xaashi.
Dhanka kale,Wafdigii ugu horeeyay ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya u diro Dowlad Goboleedka Puntland shalayna gaaray magaalada Garowe ayaa maanta magaaladaasi waxay kula kulmeen madaxweynaha Maamulka Puntland Dr. C/wali Maxamed Cali Gaas,Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland,Golaha Wakiilada Puntland iyo waliba qaar ka mid ah Bulshada rayidka iyagoona kala hadlay arrimaha haatan taagan iyo sida ugu fudud ee lagu xalin karo.
Xildhibaan Maxamed Xasan “Ra’iisalwasaaraha ha is casilo”
Baarlamaanka oo markale ka doodaya Amniga Muqdisho.